Strategy First - Upcoming Classes - OBM Level-2
Certificate in Own Business Management Level-2
Certificate in Own Business Management
Level 2: Manage Your Business
၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် အတန်းသစ် စမည်။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကို စနစ်တကျ ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲမလဲ?
သင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပါ။
လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်က ဒါတွေ နားလည်မှ အပြောင်းအလဲများတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်လက်ရရှိမှာပါ။
Ph.D (Manchester), Former President’s Economic Advisor
Dr U Sein Min
Academic Director, Strategy First Institute, PhD (Passau, Germany), M. Com, B. Com (YIE)
Dr. Daw Ohnmar Myint,
Ph.D (HRM, Delhi), M. Com, B. Com (Hons, YIE)
M.A International Business Studies (Sophia University, Japan)
M.Com, B.Com (Hons, YIE) Dip in English
MBA (Nottingham), PG Dip M, Dip M (CIM, UK) (Founder/ Principal (Strategy First Institute)
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် သီးသန့်စီစဉ်ထားသော
Certificate in Own Business Management သင်တန်းအတွက် စတင်စာရင်းပေးသွင်း အပ်နှံနိုင်ပါပြီ။
သင်ကြားပေးမည့် ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်များနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ -
1.Soft Skills for Business Owners – စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းရည်များ၊
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်, Ph.D (Manchester), Former President’s Economic Advisor
2. Managing Human Resources - လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဥမ္မာမြင့်, Ph.D (HRM, Delhi), M. Com, B. Com (Hons, YIE)
3.Managing Finances - ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း
ဒေါ်ခင်နွယ်အုန်း , M. Com, B. Com (Hons, YIE)
4.Principles of Management - စီမံခန့်ခွဲမှု သဘောတရားများ၊
ဒေါ်အေးအေးဝင်း , M.A (Int’l Business Studies, Sophia), M. Com, B. Com (Hons, YIE), Diploma in English
5.Managing Manufacturing & Operations - ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
ဒေါ်အေးအေးဝင်း, M.A (Int’l Business Studies, Sophia), M. Com, B. Com (Hons, YIE), Diploma in English
6.Managing the Markets - ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
Lecture (1). ဒေါက်တာ ဦးစိန်မင်း, Ph.D Marketing (Passau, Germany), M.com, B.Com (Hons,YIE), (Academic Director , Strategy First Institute )
Lecture (2), ဦးအောင်ချစ်ခင် , MBA (Nottingham), PG Dip M, Dip M (CIM, UK) (Founder/ Principal (Strategy First Institute)
ဘာသာရပ် ၆ခုကို လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ခြုံမိအောင် သင်ကြားပေးပါ မည်။
သင်တန်းကာလမှာတစ်ပတ် (၂)ရက် ၊ (၆၃) နာရီကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
Schedule - Wed, Thurs, Fri (9:00 AM to 12:00 PM)
Sat ( 9:00am to 3:00pm)
Starting Date --(16 January 2019 to Feb 2019) သင်တန်းကြေး - ၄၆၅,၀၀၀ ကျပ်။
- Strategy First ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများအတွက် သင်တန်းကြေး (၁၀%) ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။
- Strategy First တွင် Business Management & Administration တက်ရောက်ပြီးသောကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများ အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားပြီး တက်ရောက်လိုသူများအတွက် သင်တန်းကြေး- (၅၀%) သက်သာပါမည်။
- ထို့ပြင် ကျောင်းသား၊သူဟောင်းများအတွက် ICM Single Subject Diploma တန်းတွင် တစ်ဘာသာတက်ရောက်ပြီးသူများ OBM Level (2) ကို ထပ်မံတက်ရောက်ပါကလည်း နှစ်ဘာသာတက်ရောက်ပြီး (၁)ဘာသာ အခမဲ့တက်ရောက်မည့်အစီစဉ်အနေဖြင့်ကျောင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ICM Single Subject Diploma တန်းများ ဖြစ်သည့် Business Law , International Business Communication, Advertising, Leadership Studies, Consumer Behavior, Customer Services, Marketing Research & Quantitative Methods , Risk Management, Operation Management, Banking Management အတန်းများထဲမှ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ (၁) ဘာသာကိုလည်း အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
- ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများ၏သူငယ်ချင်းများ၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများတက်ရောက်လိုပါကလည်းသူငယ်ချင်း Refer (၂)သောင်းကျပ် လျော့ပေးပြီး သူငယ်ချင်းကျောင်းအပ်ပြီးပါကလည်း ကျောင်သားဟောင်းများအနေဖြင့် ကျောင်းတွင်လက်ဆောင်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။